Ezingena manje: ElaboHlanga ekuthuthukisweni kwezemidlalo kwabesifazane. - Bayede News
Ezingena manje: ElaboHlanga ekuthuthukisweni kwezemidlalo kwabesifazane.
Isithombe: nguThinus Maritz
UKhisimusi noNcibijane okunemibandela
Umhlinzeki wezindaba zemidlalo yabesifazane eNingizimu Afrika; i-gsport, isibambisene nabashicileli abagaya ezomdabu, i-Igunundu Press, ukuba ibuye ihlelembe okuqukethwe ngezesiNguni, ngenhloso yokuthinta imiphakathi eminingi nokugqugquzela amantombazane ukuba badlale imidlalo.
Ukusebenzisana kuzokwenza i-Igunundu Press ishicilele eze-gsport oshicilelweni lwayo oluhamba phambili iBayede News oluthinta umphakathi omqoka okhuluma ezesiNguni futhi olugxila ekufundiseni abafundi balo lubuye lwakhe ukuqonda mayelana nezindaba ezithinta ukuba yisakhamuzi esiqotho nokubuswa kwezwe.
UKass Naidoo, onguMsunguli we-gsport, uthe: “Bekuyilokhu kungezinye zezinhloso zethu ukuba esikushoyo kube sezilimini eziningi zaseNingizimu Afrika. Lokhu kusebenzisana ne-Igunundu Press kusivulela ithuba lokugadula lolu hambo ngendlela esimeme njengoba sisabalela emiphakathini emisha.”
UMsunguli noMshicileli we-Igunundu Press uMnu uNhlanhla Mtaka, uthe: ‘Ukubika ngezilimi zomdabu ngumsebenzi wethu, Lokhu kungoba sikholelwa ekutheni ulimi luyasiqondisa futhi luwubuthina. Lusiko lwethu, izimiso zethu nokuziphatha kwethu. Lokhu kusebenzisana kuzosiza ukuthuthukisa ezemidlalo kwabesifazane ikakhulukazi emalokishini nasemakhaya.”
Ukusebenzisana kuthakaselwe yiSouth Africa Media Innovation Program (SAMIP), okufuna ukuphuthumisa ezokuxhumana ezisungulwe ngokwedijithali ezikhungweni ezisabalalalisayo ezezimele zokuxhumana eNingizimu Afrika.
IMeneja Yezinhlelo kwaSAMIP, uBilala Randeree, uthe: I-Igunundu Press ne-gsport bayingxenye yeSAMIP ngakho-ke siyaziqhayisa ngokubabona bezibandakanya ekutholeni indlela yokusebenza ndawonye ukuzwakalisa izwi labesifazane nokugqugquzela ukwesekwa okungcono kwezilimi zaseNingizimu Afrika.”
IBayede News itholakala ku: www.bayedenews.com naku @BayedeNews kuTwitter.
Bheka izindaba ezihamba phambili zabesifazane ku: gsport.co.za naku: @gsport4girls ezinkundleni zokuxhumana.
nguZakhele Nyuswa Dec 8, 2020